N'ogbe Aluminom alloy ihe nchara grating emeputa na Supplier |Jintai
Aha ngwaahịa:Aluminom alloy ihe onwunwe ígwè grating
Aluminom alloy steel grating material bụ aluminum 6063. Isi ihe ndị bụ isi bụ magnesium na silicon, na-etolite usoro Mg2Si. Ọ bụrụ na ọ nwere ụfọdụ manganese na chromium, ọ nwere ike wepụ mmetụta ọjọọ nke ígwè. Mgbe ụfọdụ, obere ọla kọpa ma ọ bụ ọla kọpa. zinc na-agbakwunyere welie ike nke alloy na-enweghị budata mbenata ya corrosion resistance.bụ: dị ka e ji mara 6063 alloy tupu agbatị site okpomọkụ ọgwụgwọ usoro nke elu àgwà aluminum alloy, magnesium, silicon alloy e ji mara, nwere nhazi arụmọrụ bụ. magburu onwe ya, magburu onwe ịgbado ọkụ e ji mara na electroplating, ezi corrosion eguzogide, elu siri ike na nhazi mgbe deformation, ok ihe na-enweghị ntụpọ na mfe polishing, agba film mfe, ezi atụmatụ dị ka oxidation magburu onwe ya pụta.
Aluminom alloy ígwè grating otu dị ka ígwè mmanya grating, anyị nwere ike na-emepụta ọtụtụ ụdị nke ngwaahịa, dị ka ezigbo elu na serrated n'elu, mechiri emechi na opens.And the Aluminom m mmanya ígwè grating bụ nkịtị ngwaahịa, mkpanaka mmanya gafere site na. Enwere ike ịmepụta mmanya na-ebu ibu.
The I mmanya nkịtị size bụ 25mmx5mmx3mm,30mmx5mmx3mm na 50mmx5mmx3mm.
Aluminom alloy steel grating na-agbanwe mmetụ aka, nke kwekọrọ na 1/3 nke steel. N'okpuru otu akụkụ obe na otu ibu ahụ, aluminom alloy bụ ugboro atọ nke ígwè, ọ bụghị ike, mana ezigbo seismic performance.The hardness nso nke aluminum alloy bụ n'ozuzu. 20-120HB.The siri ike aluminum alloy dị nro karịa steel.Aluminum alloy tensile ike na ígwè ọdịiche bụkwa dịtụ large.However, aluminum alloy nwere magburu onwe plasticity na elu akụkụ precisional.It nwekwara magburu onwe corrosion eguzogide na thermal conductivity.Aluminium alloy ígwè. grid efere nwere ọdịdị mara mma, ịdị arọ dị arọ, ịdị elu dị elu, nkwụsị nke corrosion, kwesịrị ekwesị maka oge nke obere ibu. Aluminom alloy steel grid abụghị naanị ngwaahịa, kamakwa ezigbo ọrụ aka.
Aluminom alloy steel grating plate nwere ike welded site installer ma ọ bụ tinye ya na fastening na ígwè frame. Usoro ịgbado ọkụ na-enye njikọ siri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya na-adịgide adịgide n'etiti efere grid na ndị òtù ya na-akwado ya. bụrụ.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Anping County Jintai Metal Product Co.,Ltd.ga-enye gị ezigbo mma na ọrụ kacha mma, biko kpọtụrụ anyị mgbe ịchọrọ enyemaka anyị.
Product sepcification Grating arịọnụ clip Ụdị A oke A-30 A-40 A-60 center spacing nke elu clip 35mm 45mm 65mm ịghasa ogologo 65mm 65mm 65mm Lower clip ogologo 75mm 75mm 75mm Ụdị C oke A-30 A-40 A-60 etiti spacing nke elu clip 35mm 45mm 65mm ịghasa ogologo 65mm 65mm 65mm Product nkọwa Clamps na-wụnye nke ígwè grating nwere ụzọ abụọ: welded fixing na clip fixing.Ndozi welded...
Ogwe ala nchara nchara, Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ galvanized Steel grating, Ngwongwo ígwè, Ogwe ụzọ nchara nchara, Onye na-ebufe ihe nchara nchara, Galvanized Steel grating,